ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းညစာ - စတိုင်ဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်သိကောင်းစရာများ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Alicia tomero | | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အစာအာဟာရ
ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနာရီကိုရောက်တာကအမှန်ပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအိမ်ကပိုပွင့်လင်းသည် ငါတို့သည်ငါတို့၏ရေခဲသေတ္တာထဲသို့စိုးရိမ်ပူပန်ခုန်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုများသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစာအိမ်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်စွက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဤအရာကိုထိန်းချုပ်ရမည် ကျန်းမာသန်စွမ်းသောနည်းဖြင့်စားသုံးမှုမလိုပါ။
ဒီ compulsive လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခဲယဉ်းသည် ကျွန်တော်တစ် ဦး အစားအသောက်အပေါ်လျှင်။ ဤကိစ္စတွင်၊ Style with Men တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ကျန်းမာခြင်းအတွက်ညစာစားခြင်း, ရေရှည်တွင်သင်၏နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ရေရှည်တွင်ဤနေ့စဉ်အစီအစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြသည်။ ဘုရင်လိုမနက်စာစားပါ၊ မင်းသားလိုစားပါ၊ သူတောင်းစားစားသကဲ့သို့စားပါ၊ အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် ပုံမှန်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်း။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်မည်သည့်အစာကိုမျှမစားပါ၊ သို့မဟုတ်အစားအစာတိုင်းတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသာစားရမည်ဟုမဆိုလိုပါဟူသောအတွေးကိုထိန်းသိမ်းထားရန်အရေးကြီးသည်။ လက်တွေ့ကျကျအရာအားလုံးကိုစားခြင်းဖြင့်သင်ပြည့်ဝသောအစားအစာကိုရနိုင်သည်မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကဘာလဲ၊ ဘယ်အစားအစာတွေကသင့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ခံစားစေပြီးအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ် နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
စည်းကမ်းနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များထားရှိပါ ကအကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်အဆင့်ကိုမဆိုမကျော်ရန်အရေးကြီးသည်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်တဖန်နှေးကွေး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်သင်ကုန်ကျသည်။
သင်တစ်နေ့လျှင်5အစားအစာများစားရမည် (နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ မုန်နှင့်ညစာ) ၌စောင့်စားခြင်း နှစ်ခုနာရီကြားကာလတစ်ခုချင်းစီဒါကြောင့်သင်စားတဲ့အချိန်တိုင်း။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသင့်အားမှန်ကန်စွာလောင်သောအရာကိုလောင်ကျွမ်းရန်အချိန်ပေးသည် ဤနည်းဖြင့်အစာအိမ်ခံစားရလိမ့်မည် ပိုပြီး satiated နှင့်ဗလာ၏ခံစားချက်မလိုဘဲ။
ညစာစားများသည်နေ့စဉ်စားသုံးမှု၏ ၂၀-၃၀% ကိုထောက်ပံ့ပေးရမည်ဤအချက်အလက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၅၀၀ Kcal အစားအသောက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၃၀၀ မှ ၄၀၀ Kcal ညစာပါဝင်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၀၀ Kcal အစားအစာရှိအမျိုးသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 1.500 မှ 300 Kcal အစားအစာကိုညွှန်းလိမ့်မည်။
သင်ယူရန်ရှိသည် ချက်ပြုတ်, ရေနွေးအိုး, papillote သို့မဟုတ်ကင်အစားအစာများ နှင့်လက်တွေ့ကျကျကိုသုံးပါ ရေနံသို့မဟုတ်ဘာမျှမတစ်ဇွန်း။
Carbohydrate စားသုံးမှုကိုခွင့်ပြုသည်ဒါပေမယ့်၎င်း၏တရားမျှတသောအတိုင်းအတာ၌တည်၏. ၎င်း၏စားသုံးမှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသီအိုရီကိုထောကျပံ့ကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်စွမ်းအင်သူတို့ကသန့်စင်ပြီးသောအမှုန့်များမှမဟုတ်ဘဲ wholemeal ဂျုံမှုန့်ကနေဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက, ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့။
အချိုပွဲရနိုင်မလား? ဟုတ်တယ်။ သစ်သီးတစ်ပင်သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်ကိုအကြံပြုသည်၊ သို့သော်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရန်အစားအသောက်အတွက်အထူးကုအချို့အတွက်ညအချိန်တွင်နို့ထွက်ပစ္စည်းအချို့ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။
- arugula နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်နူးညံ့သောဆလတ်အညွန့်သုပ်။
- ကင် hake ။
- မြေတပြင်လုံးဂျုံပေါင်မုန့်2ချပ်။
- အချိုပွဲ - ချုံ့ထားသောဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်သစ်သီးတစ်ချောင်း။
- ခေါက်ဆွဲနှင့်အတူ Julienne ဟင်းချို။
- papillote ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူပင်လယ်ဘေ့စ် (ကြက်သွန်၊ ကညွတ်၊ မုန်လာဥ) ။
- ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှုန့် (မုန်လာဥ၊ zucchini နှင့်အစိမ်းပဲ) ။
- ကင်ကြက်သားရင်သား + ဘီစကစ် ၂ ချပ်။
- vinaigrette နှင့်ဝတ်ဆင်ထားသောအဖြူကညွတ်။
- Monkfish သည်အာလူးနှင့်ကြက်သွန်နီဖြင့်ဖုတ်သည်။
- တူဂူနှင့်ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးများဖြင့် Arugula အသုပ်၊
- အာလူးသုပ်၊ ပြီးလျှင်မုန်လာဥနီနှင့်ပဲပင်ပေါက်များနှင့်အတူဘူးသီးများ။
- ကင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အပင်များ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်နှင့်ကညွတ်။
- မွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကညွတ်ရိုင်းများနှင့်အာလူး ၁ လုံးနှင့်အတူမုန့်ဖုတ်သည့် Papillote ကိုဖုတ်သည်။
- မှိုများနှင့်ကြက်ဥတစ်ကောင်နှင့်ဥပုစွန် ၁ လုံးပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတို့သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ညစာစားပွဲများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဒါဟာတစ်ခုချင်းစီကိုတတ်နိုင်သမျှတစ်ညွှန်ပြအဆိုပြုချက်ကိုဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်မှုတစ်ခုခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်အစားထိုးပါ။ လူတိုင်းကငါးကိုမကြိုက်ကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဖြူရောင်အသားတွေအစားထိုးလို့ရတယ်။ ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် အနည်းဆုံးတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပရိုတိန်းနဲ့အမြဲရောမွှေပါ။ သင်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုလိုက်နာပြီးဤရွေးချယ်မှုသည်မလုံလောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် "လေ့ကျင့်ပြီးနောက်သင်ဘာစားရမလဲ"သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်အစာမပါဘဲကျန်းမာသောအစားအစာကိုပိုနှစ်သက်ပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် "မြေထဲပင်လယ်အစားအစာကိုဘယ်လိုစားရမလဲ".
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ကိုယ်အလေးချိန်ညစာ